နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၁၆.၁၀.၂၀၂၀ – Sports A2Z
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၁၆.၁၀.၂၀၂၀
–	အသင်းကို ကိုယ်တိုင် တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မှ စာချုပ်သစ်ကို လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အာတီတာကြောင့် အာဆင်နယ် ပရိသတ်တွေ တွစ်တာမှာ သဘောကျကြောင်း ထောက်ခံမှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီး စာချုပ်ကို ၁၀ နှစ် အနည်းဆုံး ချုပ်ဆိုဖို့ တိုက်တွန်း။
–	အိုဇေးလ်ရဲ့ ယူရိုပါလိဂ် လူစာရင်းမှာ ပါဝင်မလာမှုအတွက် နည်းပြ အာတီတာက အသင်းရဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံခြားသားကစားသမားတွေ များပြားနေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ခက်ခက်ခဲခဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီး နားလည်ပေးဖို့ပြောကြား။
–	အသင်းကနေ မထွက်ခွာနိုင်ဘဲ တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင်တစ်သိန်းနှစ်သောင်းနဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ ကိုလာစီနက်ခ်ျကို လာမယ့်ဇန်နဝါရီမှာ စီးရီးအေ ရိုးမားအသင်းကို ပို့ဆောင်သွားဖို့ အာဆင်နယ်ကြိုးစားနေ။
–	ချန်ပီယံလိဂ်ကို ၂၀၀၆ ဖိုင်နယ်မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာဟာ သူ့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး နောင်တတစ်ခုဖြစ်ပြီး လဲလို့ ရမယ်ဆိုရင် ဒီအသင်းကောင်းရဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ဆုဖလားကို ရှုံးပွဲမရှိ ရွှေဖလားနဲ့တောင် လဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အာဆင်ဝင်းဂါးပြောကြား။
–	မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာ ကွင်းလယ်ကစားသမားသစ် သောမတ်စ် ပါတေးကို ပွဲထွက်အသုံးပြုတာ တွေ့မြင်ရဖို့ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေ အလိုရှိနေကြပြီး တွစ်တာမှာ တောင်းဆိုနေကြ။
–	ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ လက်ရွေးစင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ရမှုကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ စွယ်စုံသုံးကစားသမား အိန်းစလီ မိတ်လန်းနိုင်းလ်စ်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲကစားခွင့် ဘောနပ်စ်ကို ရရှိခံစားရဖွယ်ရှိနေ။
I did the covid-19 test and unfortunately I’ve been tested positive. I feel good but I’m so disappointed to not be there this weekend ! Thanksalot for all the positive energy and I promise to be back soon and stronger https://t.co/PIDWb3OWrl
— Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) October 15, 2020
–	ဟာသာဘာလင်အသင်းကို အငှားနဲ့ သွားရောက်ကစားနေတဲ့ အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ မက်တီယို ဂန်ဒူဇီက သူ့အနေနဲ့ ကံမကောင်းလို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတာပဲလို့ သဘောထားကြောင်းနဲ့ အမြန်ဆုံး ကြံ့ခိုင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြန်လာမယ်လို့ တွစ်တာမှာ ရေးသား။
–	အသငျးကို ကိုယျတိုငျ တိုးတကျအောငျလုပျနိုငျမှ စာခြုပျသဈကို လကျခံနိုငျလိမျ့မယျလို့ ပွောလိုကျတဲ့ အာတီတာကွောငျ့ အာဆငျနယျ ပရိသတျတှေ တှဈတာမှာ သဘောကကြွောငျး ထောကျခံမှုတှေ ပွုလုပျနပွေီး စာခြုပျကို ၁၀ နှဈ အနညျးဆုံး ခြုပျဆိုဖို့ တိုကျတှနျး။
–	အိုဇေးလျရဲ့ ယူရိုပါလိဂျ လူစာရငျးမှာ ပါဝငျမလာမှုအတှကျ နညျးပွ အာတီတာက အသငျးရဲ့ လကျရှိ နိုငျငံခွားသားကစားသမားတှေ မြားပွားနတေဲ့ အခွအေနကွေောငျ့ ခကျခကျခဲခဲ ဆုံးဖွတျလိုကျရတာဖွဈပွီး နားလညျပေးဖို့ပွောကွား။
–	အသငျးကနေ မထှကျခှာနိုငျဘဲ တဈပတျလုပျခ ပေါငျတဈသိနျးနှဈသောငျးနဲ့ ဝနျထုပျဝနျပိုးဖွဈနခေဲ့တဲ့ နောကျခံလူ ကိုလာစီနကျချြကို လာမယျ့ဇနျနဝါရီမှာ စီးရီးအေ ရိုးမားအသငျးကို ပို့ဆောငျသှားဖို့ အာဆငျနယျကွိုးစားနေ။
–	ခနျြပီယံလိဂျကို ၂၀၀၆ ဖိုငျနယျမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ရတာဟာ သူ့ရဲ့ အကွီးမားဆုံး နောငျတတဈခုဖွဈပွီး လဲလို့ ရမယျဆိုရငျ ဒီအသငျးကောငျးရဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ ဆုဖလားကို ရှုံးပှဲမရှိ ရှဖေလားနဲ့တောငျ လဲဖွဈလိမျ့မယျလို့ အာဆငျဝငျးဂါးပွောကွား။
–	မနျခကျြစတာစီးတီးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအဝေးကှငျးပှဲစဉျမှာ ကှငျးလယျကစားသမားသဈ သောမတျဈ ပါတေးကို ပှဲထှကျအသုံးပွုတာ တှမွေ့ငျရဖို့ အာဆငျနယျပရိသတျတှေ အလိုရှိနကွေပွီး တှဈတာမှာ တောငျးဆိုနကွေ။
–	ပွီးခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ လကျရှေးစငျပှဲတှမှော ပါဝငျခဲ့ရမှုကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ စှယျစုံသုံးကစားသမား အိနျးစလီ မိတျလနျးနိုငျးလျဈအနနေဲ့ နိုငျငံတကာပှဲကစားခှငျ့ ဘောနပျဈကို ရရှိခံစားရဖှယျရှိနေ။
–	ဟာသာဘာလငျအသငျးကို အငှားနဲ့ သှားရောကျကစားနတေဲ့ အာဆငျနယျကှငျးလယျလူ မကျတီယို ဂနျဒူဇီက သူ့အနနေဲ့ ကံမကောငျးလို့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရတာပဲလို့ သဘောထားကွောငျးနဲ့ အမွနျဆုံး ကွံ့ခိုငျတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပွနျလာမယျလို့ တှဈတာမှာ ရေးသား။
၁၆.၁၀.၂၀၂၀၊ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလကွယ်၊ သောကြာနေ့။
နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာစီးတီးသတင်းများ စုစည်းမှု – ၁၅.၁၀.၂၀၂၀